Ensemble (2020) | MM Movie Store
ဒီရုပျရှငျကားကတော့ ဇာတျလမျးနာမညျအတိုငျးပဲတေးဂီတဖြျောဖွပှေဲမှာ ဖြျောဖွရေေးလုပျရတဲ့သရုပျဆောငျတှရေဲ့ ဘဝအကွောငျးကိုအခွခေံပွီးယောကျြား မိနျးမကွားက အခဈြရေးရဲ့ ရှုပျထှေးဆနျးကွယျပုံကိုရိုကျကူးပွသထားတဲ့ ကိုရီးယားရုပျရှငျကားပဲဖွဈပါတယျ။
အဖှဲ့ရဲ့ ဒါရိုကျတာဖွဈတဲ့ ယောငျရို့ ကတော့ ကလေးတဈယောကျရှိတဲ့ မုဆိုးဖိုတဈယောကျပါဆယျယောငျး ဆိုတဲ့ လကျထောကျဒါရိုကျတာမလေးကတော့ ကလေးအဖေ ယောငျရို့ကို သဘောကနြတေဲ့သူပါ။
အဖှဲ့ရဲ့အဓိက သရုပျဆောငျ မနျရှဈကတော့ဇနီးဖွဈသူဟယျယောငျးနဲ့ ဖြျောဖွရေေးအလုပျလုပျရငျးခဈြမိကွပွီး လကျထပျခဲ့ပမေဲ့ မထငျမှတျထားတဲ့ ကိစ်စတဈခုကွောငျ့ ကှာရှငျးဖို့ရာပွငျဆငျနတေဲ့သူပါ။သူတို့တှအေနနေဲ့ ပတျဝနျးကငျြ အမွငျနဲ့ ဆနျ့ကငျြပွီး ခဈြရတဲ့သူတှကေိုပဲရှေးခယျြမလား?????
ဒါမှမဟုတျ ဘဝရှဆေ့ကျဖို့အတှကျလုပျသငျ့တာကိုပဲရှေးခယျြကွမလားကိုတော့ ကိုယျတိုငျကွညျ့ရှုပွီး အဖွရှောကွညျ့ရအောငျပါ။ဒီဇာတျကားကိုတော့အခဈြဇာတျလမျးအေးအေးလေးတှကေို သဘောကတြဲ့ သူတှအေတှကျကတော့ အခြိနျပေးပွီး ကွညျ့သငျ့တဲ့ကားလေးတဈကားဖွဈတယျလို့ထငျပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကိုတော့ Kim seung soo, Seo yoon ah, Kim jung hwa, Lee chun hee တို့က သရုပျဆောငျထားပါတယျ
ဒီရုပ်ရှင်ကားကတော့ ဇာတ်လမ်းနာမည်အတိုင်းပဲတေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ရတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ဘဝအကြောင်းကိုအခြေခံပြီးယောက်ျား မိန်းမကြားက အချစ်ရေးရဲ့ ရှုပ်ထွေးဆန်းကြယ်ပုံကိုရိုက်ကူးပြသထားတဲ့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့ရဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ ယောင်ရို့ ကတော့ ကလေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့ မုဆိုးဖိုတစ်ယောက်ပါဆယ်ယောင်း ဆိုတဲ့ လက်ထောက်ဒါရိုက်တာမလေးကတော့ ကလေးအဖေ ယောင်ရို့ကို သဘောကျနေတဲ့သူပါ။
အဖွဲ့ရဲ့အဓိက သရုပ်ဆောင် မန်ရှစ်ကတော့ဇနီးဖြစ်သူဟယ်ယောင်းနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးအလုပ်လုပ်ရင်းချစ်မိကြပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပေမဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ကွာရှင်းဖို့ရာပြင်ဆင်နေတဲ့သူပါ။သူတို့တွေအနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အမြင်နဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုပဲရွေးချယ်မလား?????
ဒါမှမဟုတ် ဘဝရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်လုပ်သင့်တာကိုပဲရွေးချယ်ကြမလားကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုပြီး အဖြေရှာကြည့်ရအောင်ပါ။ဒီဇာတ်ကားကိုတော့အချစ်ဇာတ်လမ်းအေးအေးလေးတွေကို သဘောကျတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ အချိန်ပေးပြီး ကြည့်သင့်တဲ့ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ Kim seung soo, Seo yoon ah, Kim jung hwa, Lee chun hee တို့က သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်
Malena – Link 2